Waa maxay sababta warshadaha filimku u fashilmaan, taxanaha | Martech Zone
Sabtida, Juun 8, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Last December, Waxaan qoray qoraal ku saabsan sababta warshadaha filimku u fashilmaan. Waxaa laga yaabaa inaan qori lahaa sababta ay noo fashilayso 'annaga'. Si layaab leh, waa tan tii ku xigtay soo galitaankaas. Caawa, aniga iyo caruurta waan tagnay waana aragnay Burcad of Caribbean, Laabta Ninka Dhintay. Waxay ahayd inay si fudud ugu yeeraan, Burcad Badeedka Kariibiyaanka ah, Aan Caano Filimmo badan oo ka mid ah tan intaan kari karno ah.
Saamaynta filimku waxay ahayd mid layaableh filimkuna wuxuu ahaa madadaalo. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan loo dhicin qof walba, dhammaadka bidix kasta albaabku wuu u furan yahay filimka xiga. Markaan soo gaabiyo, waxaan daawaday 160 daqiiqo oo filim aan dhammaad lahayn. Dhammaad ma leh! Midna maaha !!! Xitaa waxaan fariistay dhibcaha si aan u daawado muuqaalka yar ee quruxda badan dhamaadka waana la kala diray taas. (Farsamo ahaan, taasi wali waxay ka tagtay qayb kale oo ka mid ah shirqoolka oo aan la daboolin).
Waan ka xumahay, Disney! Waad afuuftay. Waxaan sugi doonaa Budhcad-badeedda Qaybta III ee fiidiyaha ah. Xaqiiqdi waa inaad nafsadaada ka xishootaan.
Maxay tan ku leedahay suuqgeynta? Isbarbar yaacayaashu waxay lamid yihiin wada hadalka saaxiibkay, Pat Coyle, oo ka bilaabmay boggiisa ku saabsan xayeysiinta, suuqgeynta, iyo dhaqanka. Pat wuxuu yidhi, “Waxaan u isticmaali karnaa sheekooyinkaas inaan dadka ugu sheegno waxay rabaan inay maqlaan, oo aan lacagtooda ku helno beddel ahaan dareen kumeelgaar ah oo fulin ah. Taasi maahan ganacsi aan doonayo inaan ku dhexjiro. ”
Filimadu waa wax ka reeban sharcigan really runtii waxaan bixinaynaa dareenkaas kumeel gaarka ah ee fulintiisa. Si kastaba ha noqotee, erayga fulin wuxuu tixraac u yahay gabagabo ama dhammaad. Ka fikir hadaadan xitaa helin dareenka ku meel gaarka ah ee fulinta. Xaaladdaas, ujeedku waa in la khiyaaneeyo macaamilka oo si adag loo helo lacagtooda. Taasi waa waxa igu niyad jebiyay filimkan. Ujeedada filimku ma ahayn in si fudud lacag looga sameeyo inta ay qaadatay sameynta filimka, hadafka laga leeyahay ayaa ah in sidoo kale la iga tago anigoo aan qanacsaneyn sidaa darteed lacag badan ayaan ku bixiyaa xigta filim, sidoo kale!
Waxay ahaan jirtay in shineemooyinka lagu xardhay qorista taxanaha ama sameynta dib-u-sameynta. Hadda dhammaantood waa qayb ka mid ah ganacsiga filim sameynta. Waxaan luminay diirada saarida 'farshaxanka' waxaana liqay iskudarsiga isfaham la'aanta iyo filimada. Ugu yaraan macluumaad-bixiyeyaasha badankood waxay leeyihiin dammaanad-celin lacag-celin ah. Waa goor dambe lacagtii aan ku jilay filimkan.
Tags: Laabta Nin DhintayDisneysuuqgeynta filimadamoviesBurcad of Caribbean
Ku dheji Blogs
Ma ogtahay sida Hollywood u qeexdo Filim Faneed?
Hadday lacag samayn weydo, waa Filim Faneed.
Taasi waxay tiri, waa inaan qirto taas, markii aniga iyo xaaskeyga aan fursad u helnay inaan isla filim wada aragno, runtii waxaan aragnay Burcad-badeedda. Oo si qurux badan ugu riyaaqay.
Aniga ahaan, Burcad badeeda waa filim xiiso leh oo xiiso leh. Ma sheeganayso inay ka badan tahay. Iyo sida filimka oo kale waxaan u arkaa mid qurux badan.